7 Siyaabaha si aad caafimaad u Iyadoo Socdaalka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Siyaabaha si aad caafimaad u Iyadoo Socdaalka
Iyada oo hadda ah dillaacay of coronavirus tuuraya qorshyaasha safarka qof kasta ee la jahawareersan, waxay noqon kartaa mid adag in la ogaado haddii waa in aad aad fasaxa lagu jiro coronavirus ama maya. Inkasta oo aan ma ka dhigi kartaa go'aanka haddii aad doorato in ay sii wadaan waxa on muhiim ah in aad hubiso in aad qaado tallaabooyin si aad u ilaaliso caafimaadka. Si taas loo gaaro, halkan waa 7 Talooyin u safri caawimo aad joogto safarka halka caafimaad.
Caafimaad qabo Iyadoo Socdaalka Number 1: Ku dhaq gacmahaaga
Kanu muuqan kara cad, laakiin adiga oo dhaqaya gacmahaaga waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad naftaada u ilaaliso caafimaadka. maxaad? Sida laga soo xigtay Adeega Caafimaadka Qaranka, “Dhaqdo gacmahaaga si fiican u saaraysaa uus, fayrasyada, iyo bakteeriyada si ay u joojiyaan faafo dadka kale iyo waxyaabaha, taas oo uu ku faafi karaa cudurada sida cunto lagu sumoobo, hargab ama shuban. Waxay kaa caawin karaan dadka stop ka soo gaaray cudurada iyo iyaga dad kale ku qaadsiin”.
Si fudud u gelin, gacmo-dhaqashada uu uga takhalusi dhan gook aad ku ururto maalintii oo dhan. Tani waxaa si gaar ah loogu talagalay muhiimka ah safra. goobaha dalxiiska waxaa ka buuxa guutooyinkaaga oo dadka oo dunida ku baahsan. Haddii a kun oo qof maalin kasta waxaa taabashada birta albaabadu waxey hal, iyo hal ayaa uu gacmaha ma maydheen, qabaa sida wasakh ah waa in!
Haddii aad tahay meel aan biyo lahayn orodka ku filan ama saabuun, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad si joogto ah u hubiso in aad soo iibsatay oo loo isticmaalo gacmo nadiifiyaha gacanta. Iyada oo ay tani soo baxay qalajin karaa gacmahaaga haddii loo isticmaalo inta badan, sidoo kale waxaa jira versions of nadiifiyaha gacanta ay ku jiraan qaybaha huurka si aad u leeyihiin kartaa gacmo nadiifsan iyo maqaarka jilicsan.
hurdo ku filan
Waxaa muddo dheer la og yahay in aan hurdada ku filan si xun u saameeya habdhiska difaaca. Iyadoo fasax laga yaabaa in ay u muuqato sida fikrad fiican si aad u hesho ilaa at crack waaberiga oo ordi ilaa saqda dhexe ee habeenkii ah. Si kastaba ha ahaatee, runta waa in hurdo kugu filan wax badan impactful ka badan aad u malaynayso. Habeenkii, jidhkeenna qaadataa waqti ay u nooleynaya iyo xataa bogsiiyo. Markii ugu yar, waxaad ku Bixisaan hab hurudda markii ugu yar ee aad yeelan doontaa in aad naftaada daryeesho.
Dhab ahaan, diraasado ah ayaa muujiyay in xitaa kuwa aan hurdo ku filan u oggolaan kartaa muddo dheer effects xun sida cadaadis dhiig oo sareeya iyo xasuus la'aanta. saamaynta kaliya sii murgin kara halka safarka, sidaa darteed naftaada ku Mannaysanno iyo hubiyaan aad ku dhuftey hay ugu yaraan toddoba saacadood habeenkii ah.
In kasta oo ay adkaan karto in laga helo zzz-gaaga haddii aad guurtay dhowr soonaha waqtiga waxaana ku xanuunsanaya jet lag, waxaad isticmaali kartaa dhowr hab oo kala duwan si ay u caawiyaan jirkaaga nasato iyo fakadaan off in ay hurdo. Kuwaas waxaa ka mid Roob diiran ama qubeyska, buufiyo lavender-waxyaabaha udugga leh, meditation, iyo xataa koob diiran shaaha. In gaaban, helaan hurdo badan lagama maarmaan ah in ay gargaar aad caafimaad qabtid halka safarka.
Marseilles ilaa tikidhada tareenka ee Lyon
Tigidhada Paris ilaa tikidhada tareenka
Caafimaad qabo Iyadoo Socdaalka Oo Iska ilaali Tubada Biyaha
Haddii aad cinwaanka tahay meel ilaa xad aan la garanayn, waa inay noqdaan wax iska cad in aad u baahan tahay in ay ka fogaadaan biyaha tuubada. maxaad? Maxaa yeelay, microbes gudaha biyaha yihiin gobolka-gaar ah, iyo / ama bakteeriyada mindhicirka ma aha at dhan diyaar u xaalayn. Kumanaan qof sanadkiiba heli cabbaya buka biyo degaanka, iyadoo saamayn sida matag iyo shuban aad caadi u ah. Sida tip a, ul inay dhalooyinka biyaha mar kasta oo aad tahay qof ka fog baxay ee aaga raaxada. Tani tagaa labanlaabantay meelaha la dhaqanka nadaafadda gaarto. Dalalka kale ee ka yar horumariyo isticmaali kartaa biyaha la cabbo ka il la mid ah sida goobaha adeegga musqusha. Haa, in ay tahay wax!
Sidoo kale, hubiyo in si sax ah aad hydrate. heerkulka Hot iyo hawlaha culus yihiin tigidh si dhaqso ah isbitaalka oo aan la cabbo biyo ku filan.
Iyadoo ku xiran meesha aad ku socoto, laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u hesho tallaalada gaarka ah ee rugaha caafimaadka safarka ama xarun kale oo daryeelka caafimaadka. Tani waa run gaar ahaan qaar ka mid ah dalalka ka yar horumariyo, taas oo weli cudurrada isboortiga sida duumada iyo qandhada jaallada ah. Ka hor inta aadan madax baxay on safarkaaga, hubi Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) website. Halkan waxa aad ka heli kartaa shuruudaha gaarka ah ee dalka ay si oo aad ku socotay. Haddii aadan ka Mareykanka tahay, waxa kale oo aad eegi kartaa website degaanka, sida NHS, waayo shuruudaha aad safarka caafimaad.
joog Healthy: Ha taabanina Your Face
Sida aynu hore u hadlay oo ku saabsan gacmo-dhaqashada, hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u hadal ku saabsan wejigaaga. Inta aad arki doonaa dadka ay madaxa ku nasanayso gacmahooda, xoqidda cambaarta, ama haddii kale ku saabsan wejigooda. Waa caado adag in ay jebiyaan, laakiin ka fog wejigaaga sii gacmahaaga haddii aad isku dayaya inuu sii joogo safarka halka caafimaad.
Waa dareen caadi ah, sida gacmahaaga taabto wax badan maalintii oo dhan. on a tareen ama diyaarad, aad leedahay doonaa miiska saxaarad, suunka. oo kale oo meelo kala duwan meel caadi ah in tahay taabashada. tahay Haddii aad dhaqaya gacmahaaga mar kasta oo aad taabto wax (ama ay dhacdo in la xirto gashi), waa fikrad fiican in aad gacmahaaga sii off wejigaaga mar walba.
Waxa macno in aad ku socoto in ay si fiican u cuni halka fasax, xaq u? Ka dib oo dhan, waa maxay Spain aan shukulaatada iyo churros, iyo waa wixii aan France baguette a? Tani ma aha waxa aynu uga jeednaa, si kastaba ha ahaatee.
cunto dhadhan fiican waa si fiican oo wanaagsan oo dhan, laakiin waxaad u baahan tahay in la hubiyo in aad tahay cunto caafimaad leh iyo sidoo dhigi. Raac Ahraamta cuntada iyo beddelato kuwa goodies qoto-shiilay qaar ka mid ah cagaaran kasta hal mar, halka a. Haddii aad leedahay qol waxaa loogu talagalay, vitamins qaado si aad u sii naftaada dhaansan. Hubi in ay keenaan vitamin c, fogaado, oo kale si sahlan loo baabbi'in vitamins.
Tani waa in khamriga la cabbo muhiimka ah ugu halka safarka iyo sidoo. Waxaa si fiican u yaqaan in cabbitaanka khamriga aad u badan waxay keeni kartaa in nidaamka hoos difaaca (iyo qaar ka mid ah hangovers kuwa sharka leh). Haddii aad isku dayaya in ay ka fogaadaan buka helitaanka, hubisaa inaad dhawrtaan isticmaalka khamriga in ugu yaraan. Ka dib oo dhan, who wants to visit the Mona Lisa with a common cold?
Last Joog Healthy Tip: Nadiifi Your Area
Waxaa laga yaabaa in kaaftoomi a, laakiin waxa ay u qalantaa ee keeno qaar ka mid ah masarka nadiifiyo idin la mar kasta oo aad u safri. maxaad? Si aad u nadiifiso ilaa kuwa dhan loox saxaarad iyo kursiyada aan hore u soo sheegnay. masarka Clorox laga iibsan karaa in badan oo lagu rido bacaha ziplock. markaas waxaad iyaga ku keeni kartaa adiga kula on your sidato on.
Hubi in ay u tirtiri armrests ah, jeebka seatback (haddii aad leedahay mid ka mid ah), iyo xataa suun ay suunka aad jeermiska si ay caawimaad loo xaqiijiyo in meelaha xusullada la degaankaaga sida nadiif ah sida ugu macquulsan.
Dadka xanuunsadaan halka safraya inta badan wax kasta oo kale. Hana ka mid Noqonina qof kasta oo kale. Naftaada daryeel iyo isticmaalka Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “7 Siyaabaha si aad caafimaad u Iyadoo Socdaalka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstay-healthy-while-traveling%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#safetravel europetravel healthytravel trainjourney tareen safarka travelsafe